पाकिस्तानले टिचिङ हस्पिटललाई दुईवटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण…हेर्नुहोस् । सेयर गरौ !
काठमाडौँ :नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललाई दुईवटा एम्बुलेन्स सहयोग गरेको छ। अस्पतालको ३८औं वार्षिकोत्सव अवसरमा बुधबार नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत डा. मजर जाभेदले
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. रोहितकुमार पोखरेललाई एम्बुलेन्स हस्ता’न्तरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा दूतावासका व’रिष्ठ कूटनीतिक अधिकारी तथा अस्पतालका उच्च अधिकारीको सहभागीता रहेको थियो।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. पोख्रेलले धन्यवाद व्यक्त गर्दै दूता’वासको योग’दानको प्रशंसा गरेका थिए। उनले दूतावासले विगतमा पनि अस्पताललाई एम्बुलेन्स हस्ता’न्तरण गरेको भन्दै आगामी दिनमा पनि यस किसिमको सह’कार्य जारी रहने अपेक्षा व्यक्त गरे।
उनले नेपाली चिकित्सकहरूलाई पोस्ट ग्र्या’जुयसन सुविधाका लागि कलेज अफ फिजिसियन एन्ड सर्जन अफ पाकिस्तान (सिपिएसपी) को भूमि’काको पनि प्रशंसा गरेका थिए।
कार्यक्रममा राजदूत जाभेदले दुई मुलुकका स्वास्थ्य संस्थाबीच ठूलो सम्भावना विद्यमान रहेको बताए। उनले दुई देशका अस्पताल र स्वास्थ्य पू’र्वाधारको स्तरको सराहना गर्दै यस किसिमको सहकार्य आगामी दिनमा बढ्दै जाने आशा व्यक्त गरे।
Previous ओलीले दावी गरेको पर्साको ठोरीमा राम र सीताका प्राचीन अवशेष अझै सुरक्षित…हेर्नुहोस।
Next सरकारले सीमामा सेना खटाउने तयारी, कहिले बाट खाटाइदैछ त ? हेर्नुहोस् ।